Maxaan ugu Shaqeeyaa Lacag La'aana Wil Wheaton Qalad Maahan | Martech Zone
Maxaan ugu Shaqeeyaa Lacag La'aan iyo Wil Wheaton Inay Khaldamaan
Sabtida, Oktoobar 31, 2015 Talaado, Nofeembar 3, 2015 Douglas Karr
Qoraalkani ma aha dood, mana isku dayayo inaan dood ku bilaabo Wil Wheaton iyo shaqadiisa, kuma bixin kartid kiradaada barxadda gaarka ah waxaadna gaari kartaa bartayada. Wil Wheaton waa summad la aasaasay oo leh sooyaal muhiim ah. Wuxuu si adag u shaqeeyay si uu u horumariyo dhagaystayaashiisa iyo bulshadiisa - markaa qaylada iyo heshiiska mowqifkiisa.
Wil Wheaton edeb buu ku lahaa jawaabtiisa. Wuxuu sidoo kale ahaa mid cajiib ah inuu si cad u sameeyo do isagoo qaadanaya shar, hanti-goosad hanti-wadaag ah maalmahan oo dhan waa xanaaqa. Laakiin inteena badani ma nihin Wil Wheaton. Inteena ugu badan ayaan isku dayeynaa inaanu kobcinno gaaritaankeenna iyo dhagaystayaasheena oo aan diyaar u nahay inaan maalgashanno taas. Fursadaha lagu gaadho dhagaystayaasha sida HuffPo ayaa ahayd, dhab ahaan, maalgashi. Halkii aad ka bixin laheyd xayeysiinta, qiimuhu waa inaad soo bandhigto qaar ka mid ah awoodaada.
Aynu marka hore ka wada hadalno bahalka weyn, bahalka hanti-goosadka ee loo yaqaan 'Huffington Post'. Martech Zone wuxuu sii wadaa inuu yeesho koritaan laba-godle sanadba sanadka ka dambeeya. Toban sano ka dib khadka tooska ah, balooggu wuxuu sii wadaa inuu soo jiito macaamiisha waaweyn ee wakaaladdayada, Highbridge. Kordhinta dakhliga tooska ah ayaa wanaagsan, laakiin Jenn (saaxiibkeyga ganacsi) iyo waxaan ogahay inay tahay inaan sii wadno maalgashiga baloogga si aan u siino dakhli marin u horseedi kara faa iidada daabacaadda.
Markay daabacaaddu gaarto faa'iido weyn (marka laga reebo shaqada hay'adda), dadku waxay nooga jawaabi karaan si isku mid ah annaga oo ku saabsan qorayaasha martida iyo waxyaabaha la soo gudbiyay. Waxaan ku daabacnaa waxoogaa yar oo qoraal ah toddobaad kasta martida markaan aaminsanahay in dhagaystayaasheena ay ka faa'iideysan doonaan waxyaabaha ku jira. Ma magdhabi doono shirkadahaas ama shaqsiyaadkaas, sidoo kale.
Kama abaalmarineyno qorayaasha martida ah (weli) maxaa yeelay waxaan maalgashanay in ka badan toban sano kobcinta dhagaystayaasheena. Waxaan maal galiyaa ugu yaraan rubuc waqtigeyga usbuuc walba aqrinta aqrinta, laxiriirka shirkadaha, qiimeynta barnaamijyada, sameynta barnaamijyada, duubista barnaamijkeena fiidiyowga, aqrinta buugaagta, kaqeybgalka munaasabadaha iyo bixinta barnaamijyada taageeraya daabacaaddeena. Waxaan ka baqayaa inaan ka fekero waxa waqtigaas u qalmo… Waxaan ku qiimeeyaa malaayiin. Kirada kuma bixin karin maalgashigaas, sidoo kale!
Miyuu Wil Wheaton awood u lahaa inuu ku bixiyo kirada isaga oo ku qoraya qoraalkiisa ku saabsan Huffington Post? Ma aaminsani sidaas.
Dhageystayaashayagu waa kuwo qiimo leh. Waxaan ku bixinay gaadhistaas kumanaan saacadood iyo kumanaan doolar oo maalgashi toos ah iyo dhiirrigelin ah. Lacag siinta qorayaasha martidayagu waxay ku timaadaa fursad ay ku dhistaan ​​awooddooda dhagaystayaashayada kuna soo jiitaan inay la shaqeeyaan sababo ganacsi awgood. Shirkadaha maalgashiga ku sameeyay qorista waxyaabo aad u fara badan nala nala garowsaday dadban dakhliga ka soo baxa jagooyinkaas. Marka, inkasta oo aanan iyaga ka bixin waxyaabaha ay ka kooban yihiin, dhagaystayaasheena ayaa leh
Kuweena aan caanka ahayn ee sii wadaya inay si adag u shaqeeyaan si ay u koraan awoodeena oo ay u gaaraan khadka tooska ah, fursada ah in la gaaro oo la soo jiito dhagaystayaasha qof kale oo sii wadaya maalgashiga waa fursad aad u fiican. Ma aaminsani inay gabi ahaanba tahay dhiig-miirasho… waa fursad wax wada-qabsi oo faa'iidooyinka lagu gorgortami karo
Xaqiiqdu waxay tahay in xirfadlaha PR ee gaadhay Wil Wheaton lacag la siiyay. Marka HuffPo wuxuu lacag ku bixinayaa inuu ka codsado dadka caanka ah sida isaga oo kale. Waxaan rumeysanahay in Mr. Wheaton laga yaabo inuu awood u yeeshay inuu gorgortamo heshiis meesha uu ka faa'iideysan lahaa - si toos ah iyo si dadbanba. Waa kuwan dhowr siyaabood:
Dhiirrigelinta Buugga - Mr. Wheaton waa qoraa ku guuleystay. Waxaa laga yaabaa inuu ka wada xaajoon lahaa kor u qaadista bilaashka ah ee buugiisa guud ahaan dhagaystayaasha Huffington Post. Waxaa lagu sameyn lahaa wicitaanno ku habboon oo ficil ah oo ku saabsan qaybaha ama mowduucyada qaarkood, ama xitaa codsashada in Huffington Post ay dib u eegis ku sameyso buugaagta ganacsiga. Taasi waxay u horseedi kartaa iibka buugga yar!
Baaq-ficil - Mr. Wheaton waxaa laga yaabaa inuu awood u yeeshay inuu kala xaajoodo wicitaan-ficil gudaha Huffington Post bio kaas oo dadka ku dhiirrigeliyey inay qoraan Mr. Wheaton fursadaha hadalka. Hadalku waa dakhli faaiido badan oo soo gala kuwa leh heerka sumcadda sida Mr. Wheaton.
Dhacdooyinka HuffPo - Iyadoo ay weheliso HuffPost Live, Huffington Post sidoo kale waxay dhiirrigelisaa oo ay maalgelisaa dhowr munaasabadood oo heer gobol iyo heer qaran ah. Waxaa laga yaabaa in Mr. Wheaton uu gorgortan ka geli lahaa awoodda uu ku noqon karo afhayeen caan ah oo mushahar laga siiyo munaasabadahaas - oo xitaa uu mid walba saxiixo buug.
Qeybta ugu hooseysa ayaa ah waxaan aaminsanahay in Mr. Wheaton uu si fudud ku heli lahaa laga faa'iidaysto urur sida HuffPo ah inuu u kaxeeyo fiiro badan, dhagaystayaal, iyo - ugu dambeyntiina - dakhli isaga u gaara. Dakhligaasina wuxuu bixiyaa kirada!
Maxaan Ugu Shaqeeyaa Bilaash
Waan qoraa free waxyaabaha ku jira boggeyga, ayaan qoraa free waxyaabaha ku jira bogagga kale ee aan doonayo inaan ka qayb galo dhagaystayaashooda, waana u hadlayaa free dhacdooyinka rajada leh waxaan jeclaan lahaa inaan ka qaybqaato. Dabcan sidoo kale waan qoraa bixisay nuxurka macaamiisheenna oo anigu waxaan ahay bixisay in laga hadlo munaasabadaha kale. Mararka qaarkood, xitaa waxaan ku bixinaa wadadeena munaasabad qaran si aan ugu daboolno daabacaaddeena. Si kale haddii loo dhigo, waxaan mararka qaar bixiyaa kaliya inaan la gaaro dhagaystayaasha dhacdooyinkaas!
Fursad kasta waxaa lagu qiimeeyaa iyada oo ku saleysan sida aan uga faa'iideysan karno soo-gaadhista iyo cidda aan ku xiriirin karno halkaas. Kuweena lacag la’aan ku shaqee istiraatiijiyaddu si aad ah ayey noogu macaashay. Kharashka hal dhacdo ayaa ku dhaawacantay helitaanka qandaraas waligeen ma aanan helin si kale oo leh astaan ​​qaran. Sumaddaasi waxay keentay noocyo kale. Iyo on iyo on.
Marka, waxaa la isiinsan karay dhowr boqol oo doolar boostada boostada. Ama, waxaan la xiri karay xoogaa ganacsi ah dhagaystayaasha waxaanan goosan karaa tobanaan kun ama xitaa boqollaal kun oo doolar qandaraasyo. Hada waad ogtahay sababta aan ugu shaqeeyo free.
Xaqiiqdii, kaliya maahan inaan u shaqeeyo bilaash - Badanaa waxaan ku bixiyaa lacag la’aan si aan ugu shaqeeyo! Iyadoo lala kaashanayo Dittoe PR, waxaan si xoog leh u maalgelinnay helitaanka bartilmaameed, dhagaystayaal khuseeya oo aan dooneyno inaan gaarno. Kooxda hibada leh ee Sida caadiga ah PR Waxaan hibadayda u soo bandhigayaa qoraaladaas si aan u siiyo fursadahaas. Waxaan sii wadeynaa inaan kasbano faa'iidooyinka xiriirkaas - annagoo u shaqeyneyna shirkadaha ka shaqeeya dhagaystayaashaas oo aanan waligeen la kulmi lahayn si kale.
Miyaad leedahay weligiisba Caawiyaa dadka iyadoon mushahar la siin? Weligaa qashinka ma soo qaadatay oo qashinka ayaad ku tuurtay? Weligaa qof hoylaawe ah ma siisay lacag cunto ah? Maxaad taas u samayn lahayd? Waxaan siineynaa saraakiisha dowladeena lacag aad u badan si nadaafada wadooyinkeena loo ilaaliyo loona caawiyo kuwa danta yar. Weli waan sameynaa, in kastoo, maxaa yeelay waa naxariis.
Ma doonayo inaan ku noolaado adduun aan dadku waxba ka qabanayn ilaa laga magdhabo mooyee. Mulkiile ganacsi ahaan, waxaan kuu xaqiijin karaa inaan ka bixi doono ganacsiga haddii taasi ay tahay dabeecadda aan qaatay. Waxaan hayaa dhowr ka mid ah asxaabteyda oo aragti gaaban sidan oo kale, ka dibna waxaan maqlaa jahawareerkooda ah in ganacsigooda uusan waligiis kobcin. Waxaan rumeysanahay caawinta dadka marka hore waxay ahayd habka ugu weyn ee ganacsigeyga loo kobciyo. Hadana haddii aan qof ku caawiyo bilaash, waxay badiyaa u diraan meheraddayda macaamiisha lacagta badan qaata.
Su'aal kama keenayo akhlaaqda Mr. Wheaton, laakiin waxaan su'aal ka qabaa fikradda ah in shirkad macaash doon ahi ay cid uga faa'iidaysanayso iyaga oo weydiinaya inay siiyaan hibada ay u leeyihiin ganacsiga. Mr. Wheaton miyuu ka faa'iideysanayaa xaqiiqda ah in Huffington Post uu lacag haysto inkasta oo halista weyn iyo maalgashiga ay ku sameeyeen dhisidda bulshadooda? Waxay bixiyeen oo ay sii wadaan bixinta kharashka dayactirka iyo kor u qaadista daabacaaddooda - maxaa taas loo iska indhatiray?
Waan aqrinayaa Hooska hadda Jeff Olson iyo isbarbardhigiisu waa tii beeraley. Dhinac dhinac ka beero, beero, ka dibna ka faa'iideyso faa'iidooyinka. Beerreygu wax mushaar ah kuma siinayo abuurka, kaliya waxaa la siiyaa mushaarka markii abuurkaas si taxaddar leh loo beero oo uu u dhaliyo miraha shaqadiisa. Waxaan ku dhiiri galin lahaa qof walbo inuu abuuro abuurka meelkasta oo macno leh… waxaad soo saari doontaa dalag badan markaad sameyso!
Nagala soo qaybgal Blab
Kevin Mullett iyo waxaan ka wada hadli doonnaa mowduucan Khamiista Blab kulankeena xiga ee qafiska Suuqa! Waxaan rajeynayaa inaad nagu soo biiri karto.
Tags: huffington boostadacontent bixisaynuxur aan la bixinwil sarreen
Nov 2, 2015 saacadu markay tahay 9:26 PM
Lagu heshiiyay. Qoraaga ayay ku xiran tahay inuu go'aansado haddii ay dareemayaan soo-gaadhista inay ka abaal marinayso waqtigooda iyo dadaalkooda. Maaha mid lamid ah kuwa qorayaasha madaxa-bannaan ee dhallinyarada ah oo la weydiisto inay wax ku qoraan bilaash (ama 6 senti / eray, darn u dhow) iyadoon la helin amaah qoraa. (Aniguna waan ilaalinayaa in qorayaashaasi si aad ah u mushahar yar yihiin!)
Ugu dambayntii waxaa jira kala iibsi qiimo leh oo meesha khadkaasi ku yaal ay isbeddeli doonaan waqti ka dib iyo daabacaadda. Xitaa markii aan u shaqeynayay sidii qoraa madax-bannaan oo xirfadlayaal ah, waxaan xaqiiqsaday inay jiraan kala-sarrayn: hadba shaqada lagu caajiso iyo haddii loo yareeyo aqoonsiga, mushaharka ayaa sare u kacaya. Marka qorista buugaagta farsamada ayaa si fiican u bixin kara. Qorista sheekooyinka khayaaliga ahi waxay inta badan ku dhammaataa inaan waxba la bixin laakiin weli si qoto dheer ayey ugu qanacsan tahay qoraaga.
Nov 3, 2015 at 12: 19 AM
Waxaan wali kula doodi lahaa lacagtu inay tahay qiyaasta qiimaha. Dhallinyaro iskood u shaqeysta oo ka shaqeeya 6 / senti eray ama darn ku dhow ayaa dhisaya dib-u-bilaabid isla markaana ku mashquulinaya xirfadooda. Wax lacag ah dib ugama helin markii aan yaraa xirfad yaqaanna. Markaad ka shaqeysid farsamadaada oo aad sii fiicnaato, waxaad noqoneysaa mid qiimo badan. Waxaan ka shaqeyn jiray wargeys halkaas oo nashqadeeyayaasha loola dhaqmay si xun oo laga sameeyay mushahar aad u xun, laakiin fursadda ayaa ku bartay inay xurmeeyaan hal-abuurkooda, wax-soo-saarkooda, iyo inay bartaan aagagga ay waligood ku soo gaadhin dugsiga. Xirfadahaasi waxay ka dhigeen kuwo aad ugu tartamaya goobta shaqada waxayna awoodeen inay helaan shaqooyin aan caadi ahayn.
Sababtoo ah inaadan mushaar qaadan maanta macnaheedu maahan inaadan qiime dhisneyn oo gadaal lagaa siin doono qiimahaas.